वैद्य माओवादी गोलमेच सम्मेलनमा अडिग - BBC News नेपाली
वैद्य माओवादी गोलमेच सम्मेलनमा अडिग
20 मे 2014
Image caption संविधानसभाले मुलुकको समस्या हल गर्न नसक्ने भन्दै वैद्य माओवादीले गोलमेचको माग गर्दै आएको छ
संविधानसभाको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथ सहमति समितिले संविधान निर्माण प्रक्रिया बाहिर रहेका दल तथा समूहलाई वार्तामा बोलाउन सरकारलाई अनुरोध गरेकै दिन, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा मओवादी सहितको ३३ दलीय मोर्चाले गोलमेच सभाको आयोजना गर्न सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ।
अघिल्लो संविधानसभाले थाँती राखेका विवादित विषयहरुलाई हालको संविधानसभाले औपचारिक रुपमा संविधानसभामा प्रवेश गराएको एक हप्ता पनि नवित्दै वैद्य नेतृत्वको माओवादी सहितको ३३ दलीय मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई सर्वपक्षीय राजनीतिक गोलमेच सभाको आयोजना गर्न आग्रह गरेको हो।
अहिलेको संविधानसभाले २०४७ सालकै संविधानलाई निरन्तरता दिने खतरा रहेको भन्दै नयाँ संविधान निर्माण र राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याको हल गर्न गोलमेच सभाको माग गरिएको माओवादीका सचिव देव गुरुङले बताएका छन्।
“सबै दलहरुको बीचमा सम्झौता नगरीकन अर्को विकल्प छैन। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रणालीबाट निकास निस्कन सक्छ? संविधान जारी गर्ने विषयमा जनताको आदेश अनुसार दलहरुले सोच्नुपर्छ।”
सबै दलहरुको बीचमा सम्झौता नगरीकन अर्को विकल्प छैन। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने प्रणालीबाट निकास निस्कन सक्छ?
देव गुरुङ्ग, वैद्य माओवादीका सचिव
मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले मंसिरमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत भाग नलिई समग्र प्रक्रियाकै विरोध गर्दै आएको छ।
ऊ नेतृत्वको मोर्चालाई अहिलेकै प्रक्रियामा ल्याउने गरी सरकार वा संविधानसभाको समितिले वार्ता गर्नु पर्ने विश्लेषकहरु बताउंछन्।
“मुख लुकाउने बाटो हो भने त्यो गोलमेच सभा भने पनि राजनीतिक सम्मेलन भने पनि केही फरक पर्दैन। तर त्यो सकारात्मक हुनु पर्यो। यत्रो ठूलो अभ्यास भएको छ एकातिर भने त्यसलाई उहाँहरुले पनि मान्यता दिनुपर्छ। केही पनि मान्दिन भन्ने हो भने त फेरि उहाँहरुले संघर्ष गर्नु पर्यो। त्यसपछि मुलुकले एउटा छिनोफानो गर्छ,” राजनीतिक विश्लेषक प्रध्यापक कृष्ण खनालले बताए।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यादेश दिएर झण्डै ७० प्रतिशत मतदाताले भोट हालेका थिए।